Wararka - Maxay yihiin qodobbada farsamo ee ka shaqeynta qaybaha farsamada saxda ah
Maxay yihiin qodobbada farsamo ee saxnaanta qaybaha farsamaynta
Kahor mashiinka saxda ah ee qaybaha gawaarida, waxaa lagama maarmaan ah in si sax ah loo fahmo aqoonta ku habboon ee Shenzhen machining machining. Kadib, maxay yihiin qodobbada farsamo ee mashiinka saxda ah?
1. Fududee dayactirka iyo dayactirka mashiinka, keydinta shaqada, goynta farsamada iyo shaqeynta, iyo hagaajinta wax soo saarka shaqaalaha.
2. Cod nuugista, nuugista shoogga, MC nylon modulus aad ayuu uga yar yahay tan birta, waxay dareemeysaa in furfurnaantu ay weyn tahay, waxayna siisaa hab ka wanaagsan oo looga hortagi karo buuq ka badan birta.
3. Xidho u adkaysta, iskiis u jilicsanaanta, maqnaanshaha saliidda (ama de-saliida), waxay siisaa waxqabad wanaagsan oo ka fiican kan birta birta ah ee birta birta ah iyo walxaha la yiraahdo 'phenolic laminate', waxay yareyneysaa isticmaalka waxayna keydisaa tamarta.
4. Xarunta CNC waxay dejin kartaa qaybaha ka shaqeynta saameynta marka la qorsheynayo xuduudaha farsamada.
5. Cirbadaha feeraha birta ah ee loo yaqaan 'Tungsten steel punching' oo lagu farsameeyo qaybo farsamo ayaa leh wax soo saar iyo karti wax soo saar sare waxayna u adkeysan karaan culeys waqti dheer ah.
6. Marka la barbardhigo birta, NY nayloon wuxuu leeyahay adkaansho hoose mana waxyeeleeyo qaybaha wax shiidaya.
7. Hawlgalka ka baaraandegidda saamaynta ee farsamaynta qaybaha makaanikada ayaa noqon doona mid jajaban, waa la qalloocin karaa iyada oo aan lahayn dhalan rog, lagu daray dulqaad iyo saameyn soo noqnoqota.
8. Xasiloonida kiimikada sare, alkalis, aalkolada, ether, hydrocarbons, acids daciif ah, saliidaha siman, wasakhda, biyaha (biyaha badda), oo wuxuu leeyahay astaamaha ur, sun, dhadhan la'aan, iyo miridhku, si ballaaran loo isticmaalo ee mashiinada alkali iyo u adkaysiga daxalka , Ilaalinta deegaanka, nadiifinta, cuntada, daabacaadda dharka iyo dheehida iyo qaybo kale iyo qaybo ka kooban ayaa bixiya shuruudo.